टिभीओएसका लागि उपलब्ध पहिलो अनुप्रयोगहरूको अनावरण गरिएको छ आईफोन समाचार
टिभीओएसका लागि उपलब्ध पहिलो अनुप्रयोगहरूको अनावरण गरिएको छ
पाब्लो अपारीसियो | | Apple TV, धेरै
तपाईं सबैलाई थाहा छ, तपाईं पहिले नै यो खरीद गर्न सक्नुहुन्छ चौथो जेनरेशन एप्पल टिभी एप्पल स्टोर अनलाइन बाट र अर्को पहिलो ग्राहकहरु पुग्न सुरू हुनेछ शुक्रवार, अक्टुबर। आज सम्म के थाहा थिएन के थियो अनुप्रयोगहरू हामीसँग सुरुबाट (लगभग) हुनेछ तर, विकासकर्ताहरूलाई धन्यवाद, जसले यसमा सञ्चार गरेका छन् 9to5mac, हामी पहिले नै ATV4 सक्षम हुनेछन् को एक विचार प्राप्त गर्न सक्दछौं, यी विकासकर्ताहरूको अनुसार, बक्स खोल्ने क्षणदेखि नै।
2 श्री जम्प
3 स्ट्रीक्स कसरत
4 Withings घर
5 स्केच पार्टी
हामी ती अनुप्रयोगहरूसँग शुरू गर्दछौं जुन तपाईंलाई साँच्चिकै चासो लाग्छ। सिम्प्लेक्स एक हो Plex ग्राहक एप्पल टिभी for को लागि जुन लन्चबाट उपलब्ध हुनेछ (वा केवल पछि) उही। सिम्प्लेक्स भिडियोको साथ हामी एप्पलको सेट टॉप बक्सबाट हाम्रो प्लेक्स संग्रह पहुँच गर्न सक्दछौं।
यो त्यस्तो अनुप्रयोग होईन जुन मलाई विशेष गरी मनपर्दछ, तर त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जुन यस पानीको लागि कुर्दै छन् पानीको पानी जस्तो। त्यो सिम्प्लेक्स एप्पल टिभीको लागि उपलब्ध छ यसको मतलब छोटो छोटोमा चाँडै अन्य धेरै राम्रा अनुप्रयोगहरू हुनेछन्।
यो एप्पल टिभीको लागि सब भन्दा राम्रो खेल हुनेछैन, यो टाढा धेरै नै, तर हामीसँग पहिले नै पुष्टि छ कि श्री जम्प एप्पलको शीर्ष बक्स सेटको लागि उपलब्ध हुनेछ। खेलहरू सेप्टेम्बरमा केनोटमा चित्रित भएमा म चकित भएँ Crossy रोड, अर्को अक्टोबर 30० उपलब्ध थिएनन्।
श्री जम्प एक विश्वव्यापी अनुप्रयोग हुनेछ, जसको मतलब यो आईओएस र टिभीओएसका लागि काम गर्दछ। तपाईं यसलाई अहिल्यै आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो शुरुवातबाट टिभीओएस अनुप्रयोग स्टोर (वा टिभी स्टोर?) मा तपाईंको लागि पर्खिरहेको छ।
खेलकुद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणहरूमा सबै क्रोध हो र एप्पल टिभीलाई टाढाबाट बाहिर राख्न सकिदैन। हाम्रो खेलको तालिकामा हामीलाई मद्दत गर्न त्यहाँ अनगिन्ती अनुप्रयोगहरू छन्, तर तीमध्ये धेरैमा यो हामी ज्यादै रमाईलो हुनेछ यदि हामी तिनीहरूलाई एकमा देख्न सक्छौं। ठूलो स्क्रीन त्यो स्वचालित रूपमा प्रत्येक मिनेट बन्द हुँदैन, तपाईंको बैठक कोठामा स्क्रीन जस्तै।
स्ट्रिक्स वर्कआउटहरू ATV4 को प्रक्षेपणको लागि उपलब्ध हुनेछ।
Withings Home को साथ हामी घरभर क्यामेरा राख्न सक्छौं र के भइरहेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो बैठक कोठामा पर्दाबाट हाम्रो घरमा। उसको पालनामा बच्चाको छवि देखेर, निश्चित छ भर्खरै बच्चा जन्माएको आमा बुबाको ध्यान खिच्न। तपाईं एकै समयमा cameras क्यामेरा हेर्नको लागि सक्षम हुनुहुनेछ।
वा उही के हो, एक शब्दकोश। यस समयमा तपाईले एअरप्लेको प्रयोग गरेर केहि यस्तै खेल्न सक्नुहुन्छ, तर ऐना एप्पल टिभी प्रयोग गरेर नेटिभ टिभीओएस अनुप्रयोगसँग खेल्नु बराबर हुँदैन।
एप्पल वाचको साथ यो भएको छ, चाँडै नै अनुप्रयोगहरूको संख्या बढ्नेछ, त्यसैले हामी व्यावहारिक रूपमा सबै गर्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » टिभीओएसका लागि उपलब्ध पहिलो अनुप्रयोगहरूको अनावरण गरिएको छ
एक प्रश्न यदि तपाइँ प्लेक्स मन पराउनुहुन्न वा भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ राम्रो छ भने, म तपाईलाई कुन चाहिं प्रयोग गर्छु जान्न चाहान्छु
सन्तलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार सान्ती। यो केमा निर्भर गर्दछ। मलाई के मनपर्दैन त्यो एप्लिकेसन आफैं होइन, बरु मेरो कम्प्युटर जडान भएको हुनुपर्दछ मेरो Plex पुस्तकालयको सामग्री अन्यत्र देख्नको लागि। म फिल्म आईप्याडमा स्थानान्तरण र AcePlayer संग हेर्ने बारेमा बढी हो, उदाहरणका लागि। यदि यो चलचित्र स्ट्रिमि for को लागी हो भने, म सफारी प्रयोग गर्छु र वेबसाईटहरु को भ्रमण गर्दछ जुन मलाई लिंक प्रदान गर्दछ।
म KVDI नयाँ TvOs मा स्थापित हुनको लागि पर्खिरहेको छु !!!
जोसुलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंसँग यो स्पष्ट छ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि एप्पल कोडी अनुमोदन गर्दैछ।
आईप्याड र आईफोनमा यो केवल जेलरोन मात्र हो
२०१ Singapore मा सिंगापुर पहिलो एप्पल स्टोर खोल्न
एप्पल मर्मतको लागि प्रतिस्थापन आईफोनहरू दिन सुरु गर्दछ